CAN 2019 ANDRO VOALOHANY : Nisaraka ady sahala 2 sy 2 ny Barea sy ry zareo Gineanina
Fientanam-po, fitaintainana, hafaliana… santionany tamin’ny fihetsiky ny mpankafy “Barea” nandritra ny lalao voalohany natrehan’ny ekipam-pirenena Malagasy Barea tamin’ity Can 2019 ity ireo. 24 juin 2019
Ry zareo Guinée no nifampitana tamin’ny Barea tao amin’ny Kianja Alexandrie nandritra ity lalao voalohany natrehin’ny Barea ity. Nisaraka ady sahala tamin’ny salan’isa roa sy roa ny lalao. Ry zareo Gineanina no nanokatra ny isa teo amin’ny minitra faha-34 tamin’ny alalan’i Sory Kaba. Taty amin’ny minitra faha-48 kosa no nahitan’i Abel Anicet isa iray.
Baolina nivoaka sisiny, nodakaina avy any amin’ny ilan’ny kianja no notsenain’ity farany kotro-doha ka avy hatrany dia nigorobaka ny harato. I Abel Anicet araka izany no Malagasy nahafaty baolina voalohany teo amin’ny Can ka nofidian’ny Total ho “Homme de Match” izy taorian’ny lalao. Niady indray ny baolina taorian’izay ary teo amin’ny minitra faha-56 no nahitan’i Carolus isa iray ho an’i Madagasikara. Nanao valy bontana ry zareo Gineanina taorian’io isa io ary nahatafiditra iray indray tamin’ny alalan’i François Kamamo. Samy mbola nikofoka nitady isa fanampiny ny mpilalao roa tonta taorian’izay saingy nijanona tamin’io isa roa sy roa io ny nisarahana na dia efa nisy fanalavam-potoana nomena ny ekipa mpifanandrina aza.
Azo lazaina ho vokatra tsara sy ezaka goavana no vitan’i Madagasikara nandritra ny fiatrehana iny lalao iny satria maro tamin’ireo mpamakafaka kitra any ivelany no nihevitra fa “tany malemy azo anorenam-pangady” sy fakana isa ny Barea. Ny “France Football”, ohatra, dia nibaradaka fa tsy nampoizina ho voatazon’ny Barea ho sahala velively i Guinée izay noheverin’izy ireo fa andrarezina ao amin’io vondrona B misy antsika io.
Mbola manana lalao roa i Madagasikara taorian’iny lalao voalohany natrehiny iny ka ny lalao manaraka dia amin’ny 27 jona ho avy izao ao Alexandrie ihany. Hifanandrina amin’izy ireo amin’io ny ekipan’i Burundi. Ny lalao fahatelo farany kosa dia hatao ny 30 jona 2019 ho avy izao ka ry zareo Nigeria indray no hifampitana amin’ny Barea amin’io andro io. Tsy miova kosa ny toeram-pilalaovana fa ao Alexendrie hatrany.